Articles – mndaainfo.com
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) နှစ်တစ်ပြည့်သို့ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့မှ ပေးပို့သောသဝံလွှာ
MND AA July 1, 2021	No Comments
View More တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) နှစ်တစ်ပြည့်သို့ ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့မှ ပေးပို့သောသဝံလွှာ
MND AA June 23, 2020
နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနီးပါး ကိုးကန့်ဒေသကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည့်ဒေသခံသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း နှစ်ပေါင်းတစ်ရာနီးပါး ကိုးကန့်ဒေသကို လွှမ်းမိုးခဲ့သည့်ဒေသခံသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း (အတွဲတစ်) ဆောင်းပါးကောက်နှုတ်ချက် – 《ကိုးကန့်ရာဇဝင်မှတ်တမ်း》 ဖုန်ကြားရှင် ၊ အမျိုးသား ၊ တရုတ်လူမျိုး ဟန်မျိုးနွယ် ၊ စီချွမ်ဟူလီမျိုးရိုး။ ၁၉၃၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၆ရက်နေ့၊ တရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်တွင် ရှင်းဝေနှစ် ၁၂လပိုင်း ၁၉ရက်နေ့…
View More သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သမိုင်းကြောင်း
MND AA June 9, 2020
စစ်မြေပြင်တွင် ပြန်လည်စုံစည်းရင်း ညီနောင်အချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်စွာဖြင့် အတူတကွစကားလက်ဆုံ ပြောဆိုခြင်း။] မဟာမိတ်တပ် တပ်မဟာ (၂၁၁)၏ရှေ့တန်းတပ်၊ တအာင်းတပ် နှင့် ရှမ်းမြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ တို့မှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖလှယ်မှု ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း။ ချစ်ကြည်ရေးတပ်ဖွဲ့များအကြား တွေ့ဆုံ၍အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖလှယ်ခြင်းသည် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၏ ၁၀ နှစ်ကြာ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကာလများကြားတွင် အစဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိသည့် ကောင်းမွန်သည့် အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်သည်။ “၈.၈ အရေး”…
View More စစ်မြေပြင်မှ ညီနောင်များ
ကိုးကန့် နန်ထန်မိန်ကာကွယ်ရေးတိုက်ပွဲ၏ (၅)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
MND AA June 3, 2020
၂၀၁၅-၂၀၂၀ : မမေ့လျော့သင့်သည့် နန်ထန်မိန်တောင်တွင် အသက်ပေးစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ကြသည့် မဟာမိတ်တပ် အာဇာနည်များ။ စာရေးသူ- လီဟွာဂန်း ၁၉၉၃ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံပီကင်းတွင် “မဟာတံတိုင်းဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲ” ဖြစ်ပွားနေသည့်ကာလအတွင်း တွင် “နန်ထန်မိန်ကာကွယ်ရေးတိုက်ပွဲ” တစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းခုနှစ်၏မတ်လတွင် ဂျပန်စစ်တပ်မှ ကူပိန်ခုံမဟာတံတိုင်းခံတပ်ဖြစ်သည့် နန်ထန်မိန်ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ နန်ထန်မိန်တောင် မှာ ခမ်းရှီးဘုရင်(၄၃)နှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည့်…
View More ကိုးကန့် နန်ထန်မိန်ကာကွယ်ရေးတိုက်ပွဲ၏ (၅)နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
မဟာမိတ်တပ်မှူးဟောင်း ဖုန်ကြားဖူ မှပြောကြားသည့် ကိုးကန့်ဒေသ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ
MND AA May 25, 2020
၂၀၀၉ခုနှစ် “ကိုးကန့်ဒေသ ၈.၈အရေးအခင်း ” ပြီးနောက်တွင် မဟာမိတ်တပ်၏ စစ်ရေးမဟာဗျူ ဟာများ ပြောင်းလဲ၍ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ် တပ်မတော်၏ စစ်ရေးမဟာမိတ်ကော်မရှင် စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အခမ်းအနားတွင် မဟာမိတ် တပ်မှူးဟောင်း ဖုန်ကြားဖုန်မှ အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်ဦးစွာပြောကြားချင်တာ ကတော့ မဟာမိတ်တပ်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းပါပဲ၊ မဟာမိတ်တပ်မဖွဲ့စည်းခင်တုန်းက ကျွန်တော်တို့ဟာ မြန်မာကွန်မြူနစ်ပါတီဦးဆောင်မှု‌အောက်မှာရှိတဲ့…
View More မဟာမိတ်တပ်မှူးဟောင်း ဖုန်ကြားဖူ မှပြောကြားသည့် ကိုးကန့်ဒေသ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက် ရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ
မဟာမိတ်တပ်၏ တပ်မှူး ဖုန်ဒယ်ရိန်မှ အဖေဖြစ်သူ ဖုန်ကြားရှင်၏ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့် ဘဝဇာတ်ကြောင်းနှင့် ညီအစ်ကိုမောင်နှမသားချင်းအပေါ် ညွှန်ကြားသင်ပြမှုအပေါ် အလေးထား ပုံကို ပြောပြခြင်း ကောက်နှုတ်ချက်《 ဖုန်ကြားရှင်၏ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း》အခန်း(၆) ဖုန်ဒယ်ရိန်မှ အဖေအကြောင်း ပြောကြားခြင်း ၁၉၆၇ခုနှစ် ဂျူလိုင်လတွင် စတင်ချီတတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ တရုတ်ပြည်ထဲကို အမှန် တကယ်ဝင်ရောက်သည့်လမှာ သြဂုတ်လဖြစ်သည်၊…
View More ဖုန်ကြားရှင်၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း
MND AA April 30, 2020
သမိုင်းစာမျက်နှာနှင့်ဝာာဝန်ဝတ္တရားများဖြင့် မဟာမိတ်တပ်မတော်နှင့်ကျန်းရှီးဂျာယန်စသည့်ဒေသခံ ပြည်များ တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆက်နွယ်မိကြခြင်း မြန်မာနိုင်ငံရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေသ(၁)ကို ၁၉၈၉ခုနှစ် မတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ အထူးဒေသစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်တွင် ဒေသအကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၅၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး ဒေသဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုကို (သံလွင်မြစ်အရှေ့ဘက်)မြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် ကိုးကန့်ခရိုင်၊ လောက် ကိုင်မြို့၊ကျန်းရှီး မုံးကိုးခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့စသည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ စဉ်( ၁၉၈၉ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ခုနှစ်ထိ)…
View More ကိုးကန့်ရာဇဝင်မှတ်တမ်း
State Counsellor will lead the effort at the International Court of Justice (ICJ) to defend Myanmar’s national interest
MND AA November 24, 2019Image
View More State Counsellor will lead the effort at the International Court of Justice (ICJ) to defend Myanmar’s national interest
Who is to blame for undermining the peace?
MND AA September 30, 2019
Myanmar’s civil war has raged on and off for more than halfacentury. A new round of continuous armed conflicts broke out in the…
View More Who is to blame for undermining the peace?
“ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့ ဘာကြောင့် ကျောက်တုံးကို ကြက်ဥနဲ့ သွားထုရတာလဲ”
MND AA September 30, 2019Image
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများသည် ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်ကြာ ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ဆယ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြည်တွင်းစစ် အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်သည် ရှမ်းပြည်နယ် အထူးဒေသ (၁) ရှိ MNDAA အဖွဲ့ကို စတင်ကြံစည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကိုးကန့်ဒေသကို တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်…
View More “ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့ ဘာကြောင့် ကျောက်တုံးကို ကြက်ဥနဲ့ သွားထုရတာလဲ”